84 ireo marary mafy, efatra no lavo…: 614, tafakatra ambony be ny tranga vaovaon’ny Covid-19 | NewsMada
84 ireo marary mafy, efatra no lavo…: 614, tafakatra ambony be ny tranga vaovaon’ny Covid-19
Par Taratra sur 23/07/2020
Tsy mitsaha-mirongatra ny valanaretina ary niakatra be izany, araka ny antontanisa navoakan’ny CCO, omaly. Niampy efatra indray ireo matin’ny coronavirus ka miisa 69 izany izao ireo namoy ny ainy.
Tany Boeny ny iray lavon’ny covid-19 amin’izy ireo raha teto Anala­manga ny telo ka mitsinjara ho roa teny Anosiala ary iray tetsy amin’ny HJRA.
Etsy an-daniny, tafakatra 614 ireo olona nifindran’ny valanaretina ho an’ny 20 sy 21 jolay raha miisa 484 kosa izany ny 16 jolay teo. Anisan’ ny tranga vaovao, ambony indrindra, ny omaly, tamin’ireo antontanisa navoakan’ny CCO hatramin’izao.
Eto Analamanga ny 548 amin’ireo tranga 614
Mbola foiben’ny valanaretina hatrany ny eto Anala­manga amin’izany ka ahitana tranga vaovao 548 amin’ireo 614. Any Arivonimamo, faritra Itasy kosa miisa 27. Ahitana olona 12 tratran’ny covid-19 ny any Amoron’i Mania ka anisan’izany ary niverenany indray ny ao Ambositra, ahitana olona 10 raha roa ny any Manandriana, distrika vao nidiran’ny coronavirus. Miisa valo ny any Taolagnaro, Anosy raha fito ny any Tsiroano­mandidy, Bongolava.
Distrika vaovao nidiran’ny coronavirus
Dimy ireo any Maevata­nana, Betsiboka raha efatra ny any Mananjary sy Farafangana ary Manakara, samy distrika vao nifindran’ny valanaretina. Iray ny any Morondava, ary ny roa hafa tsy fantatra ny toerana.
Ankoatra izany, niampy dimy indray ireo marary mafy « forme grave » ka tafakatra 84 izany izao. Avy eto Analamanga ny 81 amin’ireo ahina mafy ireo ka mitsinjara ho 48 etsy Befela­tanana raha 17 eny amin’ny HJRA. Miisa fito ireo manana fahasarotana eny amin’ny Homi, Soavinan­driana raha telo ny eny Ano­siala. Miisa efatra kosa izany etsy Andoha­ta­penaka ary roa eny Fenoarivo. Na izany aza, miisa 376 ireo sitrana ka tany an-trano ny 334 amin’izy ireo.
Miisa 35 268 ny fitambaran’ny fitiliana vita, nanomboka ny 19 marsa no ho mankaty. Tafakatra 8 162 ny isan’ireo mitondra coronavirus eto Madagasikara hatramin’ny nisian’ny valanaretina raha mi­isa 4 662 ny isan’ireo sitrana amin’izao fotoana. Na izany aza, mbola misy 3 431 ireo manaraka fitsaboana sy arahi-maso ny toe-pahasalamany.